Audio Kitab: इन्दिरा प्रसांई - रनमाया
...Euta Sunney Kitab..... nepali Sahitya Mero Aawaj Ma.... Euta Koshish.....
इन्दिरा प्रसांई - रनमाया
इन्दिरा प्रसांईको भुटानि शरणार्थीको सामाजिक उपन्यास "रनमाया" लिएर आएका छौँ । यस उपन्यासमा लेखिकाले भुटानी सरकारले गरेको ज्यादाती र एउटा सम्ब्रिद्ध नेपाली भाषी परिवारको भोगाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो उपन्यास पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
यस उपन्यासको सानो अंश यस्तो छ
‘ए केटी हो ! तिमेरलाई घर जानु पनि पर्दैन र आज यसलाई यत्तिकै घेरेर बस्छौ ! उता ज्वाइँनारान राम्रै छटपटिएजस्तो छ । दाजु चाहिँ पनि बढै बोल्दैन, म बूढी के बोलूँ, उहाँ निराश हुनुभयो होला ।’ बूढी केटीहरू धपाउने सुरमा लागिन् । बूढीले ज्वाइँका कुरा गर्नासाथ उत्ताउलिएका तरुनीहरू खित्का छोडेर हाँसे । ‘जा है रनमाया ! छिटो जा, परैलाई सारो पारिसक्यो रे’ मनमायाले रनमायाको तिघ्रामा चिमोट्दै छिल्लिएर भनी ।
‘छि .... तिमीहरू कस्तो हो, लाजै छैन जे पनि बोल्छौ’ रनमाया लाजले रातीपहेँली भई । आमाको छेउमै मनमायाको वचनले उसलाई कुरिकुरी भएको थियो ।
‘ओहो, ल भइगयो रानीचरी ! अब केको लाज, हामीसँग लाजको नाटक गर्छेस्, उसँग लाज मानेको भए पो, हैन आमा !’ मनमाया आमासँग टाँसिन गई । आमा बूढी पनि धित मरुन्जेल हाँसिन् । यस्ता कुराले उनलाई पनि भित्रैदेखि काउकुती लागेर आयो । झट्ट आफ्नो बिहे, बूढासँग बिताएका क्षण एकएक सबै सम्झिन् उनले । ‘आज बूढा बाँचेका भए उनकै रात पनि त कहाँ बिरानो हुने थियो र !’ हाँस्ताहाँस्तै भित्र मुटु छुने वेदनाले गर्दा उनले चिसो खुइय काढिन् ।
‘यो मनमाया पोइ नपाएर मर्न लागी, तँलाई पनि यसैसाल गोरु नखोजी कहाँ हुन्छ र ! म तेरी आमालाई भन्दिन्छु है’ आमाले मनमायालाई अँगालोमा बाँधेर भनिन् ।
सबै तरुनीहरू बिदा भएपछि खानपिन सुरु भयो र सकियो पनि । रातको प्रथम प्रहर सुरु हुँदानहुँदै रनमाया खसमको कोठामा पुगेकी थिई । सोह्र दिन बितेपछि पनि उसलाई त्यत्तिकै लाज लागिरहेको थियो ।
गोपालले आफ्नी नवविवाहिता पत्नीलाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्योब । ‘रनमाया साँच्चै सुन्दरी हो’ यस्ती सुन्दरी पत्नी पाएकोमा गोपाललाई गर्वको अनुभूति भयो । रनमाया रूपकी मात्र सुन्दरी थिइन, उ स्वभावकी झनै परम सुन्दरी थिई । गोपालको मनमा विराजमान रनमायाको रूपले उसको सारा संसारमा राज्य गर्न लाग्यो । गोपालले थाहै नपाई रनमायाले उसमाथि राज्य नै गर्दा पनि गोपाल भने झन् परमानन्दमा पुग्न लाग्यो ।
ल सुनम है त !
Posted by आबिष्कार समर्पण at 9:20 PM
Labels: Abiskar Samarpan, Audiobook, Audiokitab, Indira Prasai, Nepali Literature, Ranamaya, Upanyas
Please leave me comments and your suggestions.... it will be source of encouragement to me. Thank you.
Bhairab Aryal (9)
Bhimnidhi Tiwari (1)
Bishwa Shakya (1)
Govinda Giri 'Prerana' (1)
Indira Prasai (1)
Laxmi Prasad Devkota (1)
Shankar Lamichane (1)
All Copyright to respective authors of the Article.. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.